Mid ka mid ah Wasiirrada Rooble oo loo heysto xoolo uu lunsaday | KEYDMEDIA ONLINE
Mid ka mid ah Wasiirrada Rooble oo loo heysto xoolo uu lunsaday
Sida ay caddeynayaan xogo muhiim ah oo ay heshay Keydmedia Online, is qabqabsi xooggan ayaa maalmahaan ka dhex taagan Wasaaradda Cayaaraha iyo Xiriirka Olombikada oo ay ku mideysan yihiin dhamaan xiriirrada cayaaraha ee ka jira dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Tan iyo guuldarradii kooxda xulka Qaranka ka soo gaartay dalka Oman, waxaa soo baxayay eedo musuqmaasuq oo loo jeedinayay Wasiirka isboortiga Soomaaliya Xamza Saciid Xamza, kaas oo qaar ka mid ah madaxda xiriirrada dalka ka jira ka codsadeen inuu is casilo.
Qaar ka mid ah Madaxda Xiriirrada, ayaa Olombikada u gudbiyay, waraaq ay ku codsanayaaan inuu si deg deg ah isku casilo Wasiirka Sportska, kadib markii ay ku eedeyeen inuu lunsaday lacag gaareysan $1.8 milyan oo ka timid UNFPA iyo FIFA.
Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed (SFF) oo aan ka mid ahayn xiriirrada tabashada qaba iyo Wasiir Xamza, ayaa si isku mid ah loogu eedeeyay guuldarradii xulka qaranka ka soo gaartay Oman dabayaaqadii bishii hore, kadib markii la ogaaday in xulku uusan kulmin muddo ku dhow labo sano.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda Xulka oo uu ugu horreeyo Axmed Saciid Casanyo, oo ah kabtanka Qaranka, ayaa si aan gambad lahayn u sheegay in Xiriirka Kubadda Cagta iyo Wasiir Xamza ka badiyeen kooxda Qaranka, masuulna ka yihiin guuldarrooyinka.
Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Hamza wuxuu xubin ka ahaa Baarlaamaankii waqtigoodu dhamaaaday 27-kii December 2020, Wuxuu doonayaa inuu diirada saaro dib u doorashadiisa isagoo u adeegsanaya xoolo dadweyne.
Xamza sidoo kale waa wasiirkii labaad ee ka tirsan Xukuumadda Farmaajo ee lagu eedeeyay kiis musuqmaasuq isla Wasaaraddan, kadib Wasiirkii hore ee Isboortiga Khadiija M. Diiriye, oo lunsatay in ka badan laba boqol oo kun oo doolar oo kaash ah, intii lagu guda jiray dayactirka Stadium Muqdisho.
Wasiir Xamsa ayaa hore loogu xasuustaa aqbalidda wareegto uu soo saaray Ra’iisul Wasaarihii hore Xasaan Cali Kheyre, bishii May 2018, taas oo loogu magacaabay Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, kadib markii ay musuq Xkuumadda hareeyay awgii xilkii uga tagtay Marwo Maryam Qaasim.
Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya, Cabdiqani Saciid Carab, ayaa qudhiisu ku lug leh qeyb ka mid ah eedeymaha, waxana lagu xagligaa inuu xilli kasta xiriir dhow la yeesho Wasiirka Sports-ka ee yimaada.
Sida ay KON u xaqiijiyeen ilo loo qaateen ah, bishii hore FIFA, ayaa su’aalo la xariira arrinkaan weydiisay Cabdiqani Saciid Carab, iyo Xamza Saciid Xamza.
Labo sano ka hor ayay ahayd markii madaxa kubbadda cagta qeybta Haweenka Soomaaliya, Shaima Maxamed, ay Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka, ku boorrisay in tallaabo la qaado kadib markii ay sheegatay in lacagaha ay FIFA ugu talagashay haweenka aysan gaarin meeshii loo qorsheeyay.
Soomaaliya ayaa kaalinta 1-aad kaga jirta dalalka ugu musuqa badan caalamka sida ku cad warbixin ay 2020 soo saartay Transparency International.